Pair Bonding 101: Newew-As-Aphrodisiac ကိုသတိပြုပါ။
Pair ကို Bond 101: ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-အမျှ-Aphrodisiac (2011) သတိပြုပါ
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ pair တစုံ-bonder "အပေါက်?" ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောနို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်သောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိ vole ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သော vole မျိုးစိတ်များစွာရှိသော်လည်းအချို့သောသတ္တဝါများသည်သက်ရှိများအတွက်အဖော်ပြုပြီးအချို့မှာမူ (နို့တိုက်သတ္တဝါများကဲ့သို့) အချည်အနှောင်မရှိကြပါ။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာပုလဲသည်လူတို့ပါဝင်သော“ လူမှုရေးအရတစ်မျိုးတည်းသော” နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် ၃ ရာခိုင်နှုန်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တိုတောင်းတဲ့ဘ ၀ အတွက်အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာအပိုတွဲစုံတွဲတစ်တွဲ ("cheating") နဲ့တွဲဖက်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တဖန်လူသားလိုပဲ။
သက်သေအထောက်အထားယခုအချိန်အထိမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှောင်ကြိုးတွဲဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဦးနှောက်ယန္တရား (ဆိုလိုသည်မှာယင်းစောင့်ရှောက်သူများ-မွေးကင်းစကလေး Bond ယန္တရားတစ်ခု exaptation) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေသောဦးနှောက်ယန္တရားများနှင့်အတူဘုံထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အကြံပြု us နှောင်ကြိုးတွဲရန်။ ဒါဟာလူသားအထူးအကျိုးစီးပွားဤ critters စေသည်:
လူမှုရေးနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောယန္တရားများအကြားသိသိသာသာထပ်တူကျနေခြင်းအားဖြင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိပုလဲသည်ဇီ ၀ ဆိုင်ရာယန္တရားများကိုဆန်းစစ်ရန်အသုံးဝင်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ [မှ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု]
ဤတွင်ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုများအတွက်ဂယက်နှင့်အတူသုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ-vole တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ကြ၏ ကျွန်တော်တို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝတွေကို:
၁။ dopamine များစွာကိုသူ၏ ဦး နှောက်ထဲသို့ဖြန့်ချိပေးသော amphetamines များပေါ်တွင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသတွင်မြင့်မားသောမြည်သံတစ်စင်းကိုရယူပါ နှောင်ကြိုးတွဲလို့မရပါဘူး။ သူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့သူ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းက "ရသင့်တယ်" neurotransmitter, dopamine ။ ဒါပေမယ့်ဝိရောဓိဖြစ်နေတယ်၊ အလွန်အကျွံ dopamine သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူ့ကို“ အခြား” အမျိုးသမီးများအားမကြိုက်စေသည့်ရွံရှာသောခံစားချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့် dopamine receptors များကိုစတင်အသက်သွင်းသည်။ အလွန်အမင်းခန့်မှန်းသောအခါသူနှင့်အတူနှောင်ကြိုးမထားဘူး မည်သည့် သူမအနေဖြင့်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါနို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများကို“ get on on” အစီအစဉ်ကြောင့်သူမလိင်ဆက်ဆံနေဆဲဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ယူဆောင်သွားသည့်သတင်းစကား? အကျိုးကို circuitry ၏ Overstimulation မေတ္တာနှင့်နှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။
၂။ စိတ်ရှုပ်စရာနှင့်စုံတွဲတွဲထားသောအပျိုစင်အပျိုနှစ်ကောင်အားအမ်ဖီတမင်းဆေးရောင်းပါ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ (pair-bonding) voles ပိုပြီးသုံးပါလိမ့်မယ်။ တိုတိုပြောရရင်သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာတူညီတဲ့ဆုလာဘ်ကြိုးဝိုင်းကဖနောင့်အပေါ်မှာခေါင်းကိုလဲကျစေချင်တယ် စွဲဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကြွက်များသည်အရက်ကိုမကြိုက်ကြပါ။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်ရပ်ကြီးခံရဖို့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်လူသားနှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွက်တူညီခိုင်မာတဲ့ buzz ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခြင်း, သောက်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်ကြသည် ယခုအရက်နှင့်စှဲ၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးများမျက်နှာပြင်မှမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သုံးပြီး လူသားဟာသူတို့ရဲ့တူ၏အသိအမှတ်ပြုမှုပါ။
3. အခုတော့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားသောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ခုလုံးနှင့်အဘို့အမိတ်လိုက်ကြပြီမဟုတ်သောသူတို့အား amphetamines ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါနှောင်ကြိုး အမ်ဖီတမင်းမနှစ်သက်ဖွယ်ကိုမတွေ့ပါနှင့်ဒါပေမယ့်အိမ်ထောင်ဖက်မရှိသူတွေကတော့မူးယစ်ဆေးဝါးကိုစပျစ်ဝိုင်နဲ့သောက်ကြပါတယ်။ ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည်တွဲဆက်မှုများကိုအားပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သော ဦး နှောက်ယန္တရားကို“ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း” ဖြစ်သည်။ အဓိကအချက် - မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်နှောင်ကြိုးယန္တရားကိုပြန်ပေးဆွဲ။ အချစ်အစားထိုးသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
bonder တစ်ခု၏ဆုကွင်းဆက်တွင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖြင့်ဖြည့်ရန်အော်ဟစ်နေသည့်“ အပေါက်သေးသေးလေး” တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး မရှိသောအခါနှောင်ကြိုးတစ်စုံသည်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေလိမ့်မည် အခြားသူ ကြောင်း "အပေါက်" ဖြည့်ရန်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့လူသားတွေဟာ“ အပေါက်” ကိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ စီးရီးရေးရာ၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ သူရဲကောင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။ ။
အရေးကြီးသောအချက်နှောင်ကြိုးမှတစ်စုံ bonder primes သောဦးနှောက်ယန္တရားဆင်ခြင်တုံတရား, စက်မှုမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြုအမူမောင်း ဖြန့်ချိ dopamine အညီ။ ပို, အဆွပြင်းထန်သောပို အဘိုး ကျနော်တို့ပေးထားသောလှုပ်ရှားမှုအတွက်ရိပ်မိ။ ထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသောအရာသည်မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှုမည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ မနုropဗေဒပညာရှင် Helen Fisher ပြောသည့်အတိုင်း“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပါ၊ ဒါက drive တစ်ခုပါ။
vole ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်တွင်, ဒီတောငျ့ -for-dopamine ကြိုးကိုင် vole ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှမျှတတကောင်းစွာနေထိုင်သည်။ အမ်ဖီတမင်းဆေးပြားကိုပတ်ပတ်လည်တွင်သိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံပညာရှင်များမရှိခဲ့ Voles များသည်သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သော pair-bonding ယန္တရားကိုမှားယွင်းစေသောဒြပ်နစ်အတက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော dopamine နှင့်မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါ။ အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များကသူတို့ကို (သူတို့၏ dopamine မြင့်တက်တယ်) လှည့်။ သူတို့ဟာ vole ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွား; အရူးကဲ့သို့မိတ်လိုက်; ပြီးတော့အတူတူခွေးကလေးပြုစုပျိုးထောင်အခြေချခဲ့သည်။
မှတ်ချက်: Pair ကို Bond တစ်ဦးမဟုတ်ပါ ကိုယ်ကျင့်တရားနည်းဗျူဟာ; ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ, နှင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းဦးနှောက်ယန္တရားကနေပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါ vole ဥပမာ Bond တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ကြောင်းပြသသည်။ အများစုမှာ pair တစုံ bonders သူတို့၏အမျိုးအနွယ်နှစ်ခုစောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူပိုကောင်းကျင့်သောကြောင့်ဒီမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲခဲ့ကြပုံရသည်။ မိဘများနှောင်ကြိုးဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားသော Bond သူကိုဒါလူသားတွေဟာဥပမာ,, ရင့်ကျက်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ ကောင်းသောအာမခံဖြစ်ကြသည်။
Pair ကို Bond ပုံမှန်အားဖြင့်ပင်ကိုစရိုက်ကကြိုးဖြစ်ပါသည်
အဘယ်အရာကိုတစ်စုံနှောင်ကြိုးထိန်းသိမ်းထား? လိင်စိတ်နိုးထစေခြင်းမဟုတ်ပါ (ဦး နှောက်သည်ထိုကဲ့သို့သော“ အဖိုးတန်သော” အတွေ့အကြုံကိုမှတ်မိစေရန်ကိုယ်တိုင်ကြိုးကြိုးတပ်ထားခြင်းကြောင့်နှောင်ကြိုးစုံကိုကူညီနိုင်သည်) ဇီဝဗေဒပညာရှင်အဆိုအရ ဒါဝိဒ်သည် Barash, ပုံမှန်စုံတွဲတစ်တွဲ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထူးသဖြင့်မကြာခဏမဟုတ်သလိုအထူးသဖြင့်စိတ်အားထက်သန်သည်။ " အိမ်ထောင်ဖက်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများစွာသည်အတူတကွအနားယူခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်“ ဆွဲထားခြင်း” ပုံစံများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဆို flirty အပြုအမူများနှင့်သုတ်ရည်ထိ ဆက်ဆက် Bond အပြုအမူတွေရှိနိုင်ပါသည်။
pair တစုံ bonders စဉ်ဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီးရှူးမီးပန်းများမပါဘဲကပ်လျက်တည်ရှိနေသည့်အချက်ကိုသောနှောင်ကြိုးအကြံပြု သူ့ဟာသူ ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမ်ဖီးလ်နှင့်မစ္စစ်ဗိုလီတို့သည်အမ်ဖီတမင်းဆေးများတွင်သူတို့၏နှာခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းကသူတို့၏ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုထင်ရှားစေသည်။ သူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်ထောင့်ကနေခုန်ထွက်သွားတာကမြင့်မားလာတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မှလွဲ၍ Pair-bonder ဦး နှောက်သည်၎င်း၏အကျိုးအတွက် bonding ကိုမြဲမြံစေရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ပေါင်းသင်းမှုသည်“ အပေါက်” ကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးအိမ်ထောင်ဖက်များစွာသည်လိင်ဆိုင်ရာမယားပြိုင်ခြင်းဖြင့်ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
အကယ်၍ အထူးသဖြင့်သွေးဆောင်မှုသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတံခါးကိုခေါက်လျှင်၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှ ၀ င်ငွေများသည်ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကဲ့သို့ မယားအများကြီး။ ဒါဟာအတော်လေးအနည်းငယ်မျိုးစိတ်အတွက်ငွိုက tolerates ။
အဆိုပါအချက်ကျနော်တို့ရဲ့ pair တစုံ-bonder ဗီဇတန်ဖိုးကို pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, ငါတို့၏ဆုလာဘ် circuitry shaped ကြပြီဖြစ်ပါတယ် နှင့် အဆိုပါထူးဆန်းအပို - pair တစုံနားချင်းဆက်မှီ။ ငါတို့၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအစုံလိုက်များကိုအတွဲလိုက်ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲများနှင့်ရောနှောနေစဉ်မျိုးရိုးဗီဇရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အတိအကျအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ bonders တွဲဘာလဲ? ငါတို့ရဲ့နားကြားမှာ dopamine ပျံနေလို့ပါ။ ကာလ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါတို့မဟုတ်ဘူး။ စုံတွဲများအပြန်အလှန်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဖောက်ပြန်မှုအပြစ်ပေးသောကြောင့်ကြိုးစားသူများသည်အန္တရာယ်များသည်။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကတိကဝတ်ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အရင်းအမြစ်အားလုံးသည်၎င်းတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်ထံသို့သွားမည်ဟူသောယူဆချက်အပေါ်အနည်းငယ်မူတည်နေသည်။ "သဘောတူညီချက်တစ်ခုသဘောတူညီမှုရ"
pair တစုံ bonders Philandering ဖြစ်လျှင်, မင်းသား Hugh Grant ကများနှင့်ဧလိရှဗက် Hurley တစ်ဦးချင်းစီကို ပြု. တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခုန်ယူပါ။ အခွင့်အလမ်းအောင်စွန့်စားမှုနှင့်အသစ်အဆန်းတိုး dopamine, ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဂယက်ရိုက်-ကအနည်းဆုံးတန်ဖိုးရှိပုံရသည်။ ကငျြ့တရားသရုပ်ဆောင်ထံမှအချို့သောလူသားမြားသညျကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ခိုးဖို့တိုက်တွန်းဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine spurts ကနေပေါ်ပေါက်။ အသစ်အဆန်းကြောင့်တူညီတဲ့ spurts တစ်ခု aphrodisiac အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လူသားမြားသ pair တစုံ-Bond စက်ပစ္စည်းအကျင့်ကိုကျင့်လမ်းမှဘာသင်ယူနိုင်သလဲ
၁။ နှောင်ကြိုးသည်အားရကျေနပ်ရောင့်ရဲသောရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ လူသားများနှင့် (အခြားတိရိစ္ဆာန်များ) အပေါ် ပိုမို၍ သုတေသနပြုမှုများကချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိခြင်း၊ နီးကပ်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပေါင်းအသင်းများသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်၊
၂။ တွဲစပ်သောမျိုးစိတ်များသည်မိတ်လိုက်ခြင်း၊ အပြုအမူ၊ အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုတို့အပေါ်များစွာမှီခိုသည်။ အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
(ဥပမာအသစ်အဆန်းကဲ့သို့) အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုးဆွမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမဂ္ဂများအနားယူသည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစက်ယန္တရားကိုအပိုင်စီးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကိစ္စ၊ အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ cam-3-cam တွေ့ဆုံမှုများနှင့် ထပ်မံ၍ dopamine အပိုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတုန်ခါသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုနည်းသောမူလနှောင်ကြိုးကိုဟပ်ဒရမ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Tiger Woods ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း 4. သဘာဝပါ ၀ င်မှုအတွက်တောင်းခံလိုသောကြင်ဖော်များသည် dopamine ကိုအသင့်အတင့်ဖြစ်စေသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုပဲလုပ်ပါ ကို virtual အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အ "အိမ်ထောင်ဖက်" ညည်းတွား။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့အင်တာနက်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ဖို့အလားအလာရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် undervalue။ (လိင်ကစားစရာနိုင် တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ, ဒါပေါ့။)
သတိရပါဦးနှောက်၏စရိုက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ယုတ္တိဗေဒသို့မဟုတ်မွေးရာပါတန်ဖိုးကိုအပေါ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းကိုသာယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြန့်ချိ dopamine ၏အရေအတွက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။
ဤအရာအားလုံးသည်ယနေ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အများစုသည်တွဲဆက်လိုသောချစ်သူများအတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ dopamine-cranking“ novity-as-aphrodisiac” နည်းဗျူဟာကို အခြေခံ၍ လိင်ကစားစရာအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်း၊ မိတ်ဖက်များဖလှယ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်စေသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့ကိုအခြေခံသည်။ အသစ်အဆန်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အမှန်ပင်နှိုးဆွပေးသည်။ သို့သျောလညျးအသစ်အဆန်းအဖြစ် ashrodisiac အားနည်းချက်များရှိသည်။
ပထမတစ်ခုသင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါ။ အနာဂတ်၌ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရရန်သင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသစ်ဖြစ်သော ashrodisiac သည်ရေရှည်မတည်ရှိပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုသိသာထင်ရှားသည့်ရွေးချယ်စရာများမှထုတ်လုပ်သော dopamine ပိုလျှံစွာဖြင့်ထိတ်လန့်သွားပြီးနောက်သင်ဘာလုပ်သနည်း။
ဒုတိယအချက်အလွန်းဆွတကယ်လုပ်နိုင် ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုထုံခြင်း။ ဒါကြောင့်အစားကိုပိုမိုရောငျ့ရဲ feeling သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကပ်လျက်တည်ရှိ၏, ချစ်သူများအစဉ်အဆက်ပြင်းထန်သော, အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်အထွတ်အထိပ်ကြား၌ထက်ပိုပြီးမကျေနပ်ခံစားရပေမည်။ သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်သို့မပြန်မှီတိုင်အောင်, ပုံမှန် sensitivity ကိုသငျသညျအသီးအသီးအခြားအပင် duller ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
အကြံပြုချက်: သင်ရောငျ့ရဲတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်သင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဆက်ထိန်းရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်ပထမဆုံးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကနေသင်ခန်းစာယူ: Bond ချို့ယွင်းသော overstimulation ရှောင်ရှားရန်သင်သည်အဘယ်သို့တတ်နိုင်ပါ။ စုံစမ်းနှောင့ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက် ပို. ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲအဖြစ်သူတို့ထက်ကြောင့်ဒီအကြံပေးချက်ကိုယနေ့အထူးသဖြင့်ဝေဖန်ဖြစ်နိုင်သည်။ (အထက်တန်းကျောင်းတစ်ဦးကဆိသည်သူ၏ဘိုးဘေးထက်အတန်းအကြားခန်းမ၌ သာ. စတားမင်းသမီးကို virtual စတားမင်းသမီးကဖော်ပြခြင်းမတစ်ဦးတစ်သက်တာအတွက်ကိုမြင်လျှင်မြင်သည်။ )
ဒုတိယအချက်မှာမာစတာနှင့် employ ပု ပူးတွဲမှုတွေကို အရာအပေါ်ကိုအခြားတစ်စုံ-Bond မျိုးစိတ်အသိအားကိုး။ ရသည်မှာကျနော်တို့လူသားမြားသညျလညျးကိုသိရန်အသုံးပြု:
လိင်အဘို့, တစ် horsefly ၎င်း၏လက်နက်နှင့်အတူလုပ်နိုင်တဲ့ Madden နဲ့တူ
တိုက်စားမှုမိမိအ string ကိုနှစ်မြှားရှိပါတယ်။ ။ ။ ။
-Euripides ( ca. 480-406 ဘီစီ), Aulis မှာ Iphegenia
အင်တာနက် porn ကိုတောင်မတွေ့ခင်ငါကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိပ်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ယောက်ျားများစွပ်စွဲခံထားရသော 'ခါးပတ်ကြိုးတစ်ချောင်းမဟုတ်သောအရာ' မဟုတ်ဘဲအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ထူးခြားသောကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးယခင်နှင့်မတူပဲကွဲပြားခြားနားသည်။ အကြိမ်အနည်းငယ်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်ခြင်းကအခြားတစ်ယောက်လိုပဲငါလိုချင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်အံ့သြစရာမဟုတ်သေးသော်လည်းနောက်လာမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။
ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကအချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအမျိုးသမီးကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးဂရုစိုက်တယ်။ ငါသူတို့အတွက်အရာရာလုပ်ပေးပြီးသူတို့နဲ့ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ငါကျည်ဆံတစ်ချောင်းတောင်ယူသွားနိုင်တယ် သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့နှင့်အတူအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမှုအတွက်စိတ်မဝင်စားဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ့်တစ်ခု၊ နှစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်အဲဒါကသူတို့ကိုလအနည်းငယ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရလို့သူတို့ခဏလောက်ဝေးသွားလိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့ကဝေးဖြစ်ခြင်းအလိုဆန္ဒပြန်နိုး။
porn လူအပေါင်းတို့အပေါ်ရှိပါတယ်ထိခိုက်စေဘယ်အရာကိုမဆိုနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကတောင်ကြားဆက်ဆံရေးအဘို့အကြည့်ဖို့ငါ့ကိုလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖန်ဆင်းတော်မူပြီဟုပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုရငျးနှီးမှုနှငျ့ပေါငျး share ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအတော်လေးအနည်းငယ်အမျိုးသမီးတွေသူငယ်ချင်းများကိုမ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဝေးလိင်တတ်သကဲ့သို့, ဒီဗီဒီအတွက် pop site တစ်ခုတက်ဆွဲထုတ်သို့မဟုတ်ပင်ရုံဟောင်းချစ်သူများငါ၏အမှတ်တရများမှတဆင့် run ဖို့ပဲအရမ်းလွယ်ခြင်းနှင့် masturbate ။
ထိုအခါငါတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုးခေါင်နေစဉ်အတွင်း porn ရှာဖွေတွေ့ရှိဆိုတဲ့အချက်ကို။ လုံလောက်သောအမြိုးသမီးမြားမိတျဆှမြေားသော်လည်းငါ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိအမျိုးသမီးများကို။ မိုးခေါင်နှစ်ပေါင်းသွားလေ၏။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်နှစ်သက်၌ငါ့အပျြောအပါးကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါတောင်မှနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ pron ကိုကြည့်ကြဘူး။ ငါနက်ဖြန်နေ့၌အလုပ်မလုပ်ရန်မလိုပါသောအခါမူကားတစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒါသည်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညဥ့်ကျွန်မရဲ့အချိန် ယူ. site တစ်ခုဆောင်ခဲ့နှင့်စုံတွဲတစ်တွဲသွားကြကုန်အံ့။ ဒါဟာသိပ်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကဒီအပိုင်းအစရေးသားခြင်းကတည်းက လေ့လာမှုထွက်လာသ ကြောင်းနည်းပါးလာမိတ်ဖက်တွေ့ကြုံသောသူယောက်ျားဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြသခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌အကြှနျုပျတို့၏အသစ်အဆန်းနီးစပ်, ယုံကြည်စိတ်ချရအဖော်များနှင့်ချစ်ခင်ထိတွေ့မှု၏စျေးနှုန်းဖြစ်သနည်း ဘယ်ကိစ္စမဆို, ဤဆောင်းပါးတွင် သူသည်မိမိအခရီးဝေးမိတ်ဖက်နှင့်အတူ မှလွဲ. အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခဲ့ရရှင်းပြပေမည်။
၂၀၁၅ လေ့လာမှု -ဘာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခက်အခဲများခန့်မှန်းအချက်များ" - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအတွက်အခက်အခဲများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။
2016 လေ့လာချက်: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လူ့ကဲ့သို့ချမ်းသာခြင်းပြသ [ပေမယ့် Non-pair တစုံ-Bond voles မကျင့်]
2016 စက္ကူ: ပြင်းထန်သော, စိတ်အားထက်သန်မှု, Romantic မတ်ေတာသညျမြား: A သဘာဝစွဲ? Romance နှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒါက Fields တစ်ခုချင်းစီကိုအခြားအကြောင်းကြားနိုင်ပုံ အဆိုပါစာရေးဆရာစွဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီဖို့ရန်ဤ circuitry ပုတ်၏နည်းလမ်းတွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။